सजावटी खरायो: प्रतिक्रियाहरू। नस्ल, मूल्य, खरायो सामग्री
लघु खरायो - आज, थुप्रै परिवारलाई मा, बिरालोहरु, कुकुर, चरा र माछा संग, आकर्षक प्राणीहरू बाँचिरहेका छौं। यी बारेमा टिप्पणी प्यारा जनावर - उत्साही। यी बच्चाहरु धेरै शान्त र कोमल छन्। तिनीहरूले जटिल हेरविचार आवश्यक छैन, तर आफ्नो मालिकहरूलाई सकारात्मक भावना धेरै दिन।
एक पाल्तु जनावर खरायो छनौट
अक्सर, अनुभव प्रजनकों मान्छे पशु किन्न आउने छक्क छन्, र यो बारेमा यो केही थाहा पूर्ण छ। एक दुई महिना बच्चा कस्तो हुनुपर्छ? यसलाई कसरी जब बढ्न अप हुनेछ? के उहाँले हेरविचार आवश्यक छ? कस्तो समस्या नयाँ परिवारको सदस्य मा स्वास्थ्य संग उत्पन्न हुन सक्छ? एक पाल्तु जनावर खरिद गर्नु अघि, यो बारेमा थप जान्न प्रयास गर्नुहोस्, तर यो मामला मा के तपाईं आफ्नो घर मा रहन पर्याप्त हेरविचार र सान्त्वना उहाँलाई प्रदान गर्न सक्षम छन् भने देख्न सक्छौं।
सजावटी खरायो - आकार
यो आकर्षक बच्चा जसले तपाईंलाई एक व्युत्पत्ति जनावर, सबै कागजात संग प्रदान गर्नेछ सर्वश्रेष्ठ प्रजनकों व्यवसायीक प्राप्त गर्न। तपाईं वयस्क जनावर हेर्न सक्छन्। तपाईं को पाल्तु जनावर पसलमा छैन उल्लेख यस्तो मौका भने।
को सजावटी खरायो बीच मुख्य फरक - आफ्नो सानो आकार। सामान्यतया, एक वयस्क व्यक्तिगत कुनै थप दुई किलोग्राम भन्दा वजन। लघु - त्यहाँ पनि अधिक सानो जनावर हो बौना खरायो। आफ्नो वजन 1.5 भन्दा बढी किलो छैन। तुलना लागि, मासु खरायो नस्ल 8 किलो गर्न बढ्छ। आधा - सजावटी बच्चा दुई महिना आयु (यो आमाबाट लगिएको गर्न सकिन्छ जब) 300 ग्राम, र एक बौना वजन।
खरायो Ornamental चट्टानको कान को लम्बाइ द्वारा प्रतिष्ठित गर्न सकिन्छ - यो3भन्दा बढी सेमी (वयस्क पशु आफ्नो लम्बाइ5सेमी बढ्छ) छैन। मासु जातिहरु को खरायो धेरै लामो कान फरक।
तपाईं खरायो धेरै तेजी बढिरहेको जान्नु आवश्यक छ। केज एक पटक यो एक वयस्क पशु रूपमा ठूलो किन्न आवश्यक छ। आफ्नो पाल्तु जनावर, उनको मा चुपचाप झूठ पूर्ण मा फैलयो हिंद खुट्टा मा खडा र सेल टाउको को छत स्पर्श गर्दैन पर्छ। साथै, बच्चा को लागि एक घर त्यहाँ हुनुपर्छ - उहाँले कहिलेकाहीं सबै एक ब्रेक चाहनुहुन्छ र एक्लै हुन। यो एक पिंजरे हुनुपर्छ, र एक ट्रे, Autodrinking कटोरे र feeders। को चटाई एक ग्रिल भन्दा एक प्लास्टिक चयन गर्न मनमोहक छ। पंजे पंजे पशु ग्रिड गर्न छाँटकाँट छैन।
सुन्दर "मौसम" धेरै लघु bunnies जस्तै, गर्मी भन्दा बढि छ। यो स्पष्ट बारेमा मालिक को समीक्षा: यी पशुहरू लागि बेहतर तापमान छैन 18 डिग्री माथिको छ। यो चिस्यान मा 50% हुनुपर्छ। यी पशुहरू मा गर्मी स्थानान्तरण कि जनावर को कान मा रहेका नसाहरु मार्फत हुन्छ। त्यसैले, तपाईंले आफ्नो पाल्तु जनावर गर्मी भोगिरहेका छ याद भने, आफ्नो कान RUB, कपडा पानी moistened। संग नै उद्देश्य चिसो पानी संग सेल प्लास्टिक बोतल मा राख्न सकिन्छ (र पनि बरफ टुक्राहरू)।
तपाईं एक निजी घर वा अपार्टमेन्ट बस्ने कि बिना खरायो राम्रो सेल मा बसोबास गर्छन्। जनावर डर लागि यो केही कुनामा लुकाउन सक्छ, र यो पाउन धेरै गाह्रो हुनेछ, धेरै काँतर छ।
यो धेरै गाह्रो हुनुपर्छ हात राख्नुहोस्। एक सजावटी खरायो - यो एक धेरै सार्ने र "nimble" प्राणी हो। नस्ल, फोटो, हामी तपाईंलाई यो लेखमा प्रस्तुत। यी पशुहरू को मालिक आफ्नो पाल्तु जनावर धेरै नाजुक मेरुदण्ड हो भनेर थाहा पर्छ। मानव विकास एक उचाइ बाट जम्प उहाँलाई लागि घातक हुन सक्छ।
बिरालो वा कुकुर संग सम्पर्क तपाईंको पाल्तु जनावर अलग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तिनीहरूले एक बच्चा Chase गर्न सक्नुहुन्छ, र एक म्याराथन सधैं उहाँलाई लागि राम्रो छ। परिवार जवान छोराछोरीलाई छ भने (6 वर्ष मुनिका), एक खरायो सुरु हुँदैन। कान एक छाला, - छोराछोरी, उत्सुक छन् तिनीहरूले गल्ति आफ्नो संवेदनशीलता हथियाने, जनावरको चोट लाग्नु गर्न सक्नुहुन्छ। स्नायु अवस्था कसैले साथै लाभ छ, र खरायो। जनावर बिरामी र सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो गर्न सक्नुहुन्छ।
Ornamental खरायो को रोगहरु
दुर्भाग्यवश, यी प्यारा साना जनावर, रोग पनि खतरा, साथै सबै जीवित प्राणीहरू। सबै भन्दा साधारण रोगहरु समावेश:
Myxomatosis - एक तीव्र भाइरल रोग, खरायो लागि निकै खतरनाक हुन्छ। यो एउटा प्रारम्भिक उमेर मा एक खरायो राखिदिन गर्न आवश्यक छ। रोग एक स्वस्थ रोगी गर्न पशु देखि कीराहरूको बाइट्स र fleas द्वारा प्रसारित छ, यो दुई पक्षबाट उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
Edematous - सबैभन्दा खतरनाक। एक गर्मी चालू अवधि (5-7 दिन) पछि, तपाईं पशु मा कुनै पनि लक्षण देखाउन बेला एक purulent conjunctivitis को संकेत देखाउँछ। टाउको मा र लैंगिक क्षेत्रमा ठूलो ट्यूमर देखिन्छन्। खरायो खान, सास shortness मना गर्यो, कान कम। अवस्थामा को 90% मा पशु मा 10 औं दिन हत्या गरिएको छ। रोग को रोकथाम - मात्र खोप।
Nodular फारम कम साधारण छ। प्रभावित जनावर छाला अन्तर्गत र छाला मा लोचदार छाप देखिन्छन्।
VGTBK - अर्को भयानक भाइरल रोग। यो प्रत्यक्ष सम्पर्क र कीराहरूको बाइट्स द्वारा एक बिरामी पशु दुवै बाट प्रसारित छ। रोग घातक छ। उपचार अहिले सम्म। एक स्वस्थ खरायो को खुट्टा को केही convulsive आन्दोलनहरु बनाउँछ र मर्छ गर्न सामान्यतया सङ्केत। आफ्नो बच्चा मात्र खोप सुरक्षित गर्नुहोस्।
मधुमेह - जो भाँचिएको वा अनुपस्थित इन्सुलिन उत्पादन मा अग्नाशयी रोग। सर्वेक्षण क्लिनिक मा पशुचिकित्सा सञ्चालन गरिएको छ, र त्यो पनि उपचार prescribes। मालिक जस्तै सामान्य भोक बढेको तिर्खा, urination अत्यधिक वजन, धमिलो pupils रूपमा लक्षण ध्यान गर्नुपर्छ।
Ornamental खरायो को रोगहरु रोकियो गर्नुपर्छ। यो मा मुख्य भूमिका समसामयिक खोप द्वारा प्ले छ। तपाईं खरायो असामान्य व्यवहार छ, तर तपाईं कारण थाहा छैन नोटिस भने - द्रुत क्लिनिक यसलाई ल्याउन। अवस्थामा 80% मा, vetpomoschyu ठीक-ठीक समयमा उपचार सजावटी खरायो ठीक। मालिकहरूको समीक्षा - प्रमाण। यी पशुहरू को प्रशंसक वहाँ सधैं पनि सबैभन्दा डरलाग्दो रोग संग लड्न मदत नयाँ लागूपदार्थ हुन् भनेर बताउनुहोस्।
सजावटी खरायो - नस्ल
मिति, त्यहाँ Ornamental खरायो को 60 भन्दा बढी प्रजाति छन्। हाम्रो लेखमा हामी तिनीहरूलाई केही बारेमा भन्नेछु।
एक Ornamental खरायो को पुरानो र सबैभन्दा लोकप्रिय जातिहरु को। आफ्नो वजन 2.2 देखि 3.3 किलो गर्न लिएर।
यी पशुहरू एक सिलिण्डर आकारको एक बाक्लो शरीर छ। रंग - "डच पुतली।" यो हो कि कान, गाला र फर बाँकी जस्तै रंग को कम मुर्कुट्टा - अर्को। तिनीहरूले कालो नीलो, खैरो, र यति मा हुन सक्छ। डी
सजावटी खरायो लोरि-eared (डच) - यो फरक नस्ल छ। यो प्रजाति, भेडा खरायो को प्रतिनिधि हो। छोराछोरीको कान तुरुन्तै झुन्डिएको छैन - 1-2 महिना सम्म, तिनीहरूले भन्दा साधारण छन्। 1500 ग्राम गर्न वजन द्वारा।
आज एक पाल्तु जनावर खरायो सजावटी रूपमा धेरै लोकप्रिय छ। नस्ल, यी हास्यास्पद जनावरहरूको फोटो अक्सर प्रकाशनहरू को पृष्ठ मा देख्न सकिन्छ। अक्सर, तिनीहरूलाई चासो एक असामान्य रूप कारण छ।
गत शताब्दीको बीचमा देखा, यो नस्ल युरोप जितेको। नेदरल्याण्ड्स - त्यहाँ यी जातिहरु खरायो थिए जहाँ एक ठाउँ। यी असाधारण प्राणीहरू उत्साहित मालिकहरूले आफ्नो कुरा बारे टिप्पणी "साहस।" आफ्नो सानो cousins विपरीत तिनीहरू nepuglivy, र यसैले विशेष आकर्षक। र तिनीहरूको साहस लागि कारण बच्चा झुन्डिएको कान कान नहर कवर र खरायो धेरै राम्रो सुन्न छैन भन्ने तथ्यलाई मा निहित।
"पाठाहरूलाई" अलिकति जो साँच्चै पाठो जस्तो देखिन्छ टाउको, लम्बी छन्। एउटा सानो जुरे संग नाक। कान झुन्डिएको। रंग धेरै विविध छ। तिनीहरूले अन्य खेलौना जातिहरु भन्दा ठूलो हो। आफ्नो वजन3किलो भन्दा ठूलो छ।
एक दुई महिना खरायो 1800-2000 rubles को मूल्य - यो एकदम महंगा खरायो जातिहरु छ।
यो धेरै सुन्दर सजावटी पाल्तु जनावर खरायो छ। यो एक शानदार फर कोट छ देखि तिनीहरूलाई हेरचाह, एक बिट थप जटिल छ। ऊन लम्बाइ सात सेन्टिमिटर छ। यसबाहेक, यस्तो आवरण मात्र ट्रंक छ। उनको टाउको मा त्यो एकदम छोटो छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एक कोर्नु पाल्तु जनावर हरेक दिन छ। वजन 900 ग्राम। 1.5 किलोग्राम गर्न।
अर्को धेरै सुन्दर सजावटी घर खरायो हेरविचार हरेक दिन बाहिर comb आवश्यक छ कि भव्य कोट उपस्थिति द्वारा जटिल छ जो। जनावर को ट्रंक छोटो, ठूलो टाउको, को अन्त्य मा पंख tassels संग सानो कान। रंग, सेतो कालो, खैरो, नीलो। वजन 2.4 3.5 किलो। Downy कपाल माथि 22 सेमी बढ्छ।
यो नस्ल छोटो-haired खरायो पर्छ। आफ्नो फर भव्य वा मखमल को reminiscent छ। यी खरायो धेरै शिष्ट हेर्न, र तिनीहरूले4किलो सम्म वजन गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो छ।
पशु शरीर केहि एक सिलिण्डर आकार भएको, लम्बी। आँखा ठूलो हो, कान सँगै बन्द गर्नुहोस्। हिंद खुट्टा धेरै लामो अगाडि भन्दा हुन्। यो नस्ल को प्रतिनिधिको कुनै जुङ्गा छन्। यो आधारमा तिनीहरूले जन्म मा सजिलै विशिष्ट हुन सक्छ।
सजावटी खरायो खर्च
तपाईंले यी प्यारा जनावरहरू किन्न कटिबद्ध छन् भने, तपाईं 600 4000 मा rubles, धेरै मापदण्डहरु द्वारा अनुमानित देखि दायरा मूल्य जो कि सजावटी खरायो, जान्नु आवश्यक:
को व्युत्पत्ति उपस्थिति;
सस्ता जनावरहरू बजार मा खरिद गर्न सकिन्छ। तर यहाँ तपाईं अज्ञात नस्ल, धेरै सानो वा, त्यसको विपरीत, धेरै को खरीद पशु को खतरा छन्। अक्सर बेईमान विक्रेता दुई महिनाको लागि सप्ताह खरायो दिनुहोस्। बच्चालाई बाहेक, त्यसैले प्रारम्भिक आमा बाट पृथक बिरामी हुन सक्छ।
आज धेरै मानिसहरू जन्म सजावटी खरायो दिनुहोस्। यो बिल्कुल "बेकारी" जनावर हो भनेर जस्तो थियो। खरायो चूहों, बिरालोहरु जस्तै, समातेर चराहरूले को बिहान गीतहरू मा गाउन छैन छैन, कुकुर जस्तै घर राख्न छैन। आफ्नो अपील के छ?
मालिक को समीक्षा द्वारा न्याय, सजावटी खरायो - यो घरमा एउटा अचम्मको आनन्द छ। तिनीहरूले लजालु थिए मात्र पहिलो छ। परिवारमा केही समय जीवित गरेपछि तिनीहरूले हात गर्न इच्छुक थिए। धेरै मालिक बच्चाको यी बच्चाहरु को एक लाभदायक प्रभाव रिपोर्ट। बच्चाहरु थप जिम्मेवार र मायालु हुन्छन्।
कसरी र कहाँ एक्स-रेज कुकुर?
को ट्रे मा हिंड्न एक बिल्ली को बच्चा कसरी तालिम? प्रशिक्षण गर्न रहस्य को furry पाल्तु जनावर
चित्रित पोकर: नियम, सुविधा र सिफारिसहरू
स्वेटर - यो छाती मांसपेशीमा विकास लागि व्यायाम
त्रिविम दृष्टि के हो
भाडामा स्पेन एक कार - ट्याक्सी आदेश भन्दा किन एक कार भाडामा
Waterproofing "Mapey": को को स्कोप र संरचना
को अंग्रेजी भाषामा सहभागिता: उपयोग उदाहरणहरु
कस्मेटोलोजीमा कालो श्वेत कसरी प्रयोग गर्ने
को जाडो लागि टमाटर सस - फोटो संग नुस्खा